ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ (၄) - MoeMaKa Media
Home / Computer / Junior Win / Literature / Thoughts / ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ (၄)
ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ (၄)
Computer, Junior Win, Literature, Thoughts
(အတွေးအမြင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉)
မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၉
(2001 ခုနှစ်ထုတ် M. Mitchell Waldrop (အမ် မီချယ် ဝါလ့်ဒရော့) ရေးသားသော The Dream Machine ကို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ J.C.R. Licklider နဲ့ သူ့ရဲ့ ပါစင်နယ်ကွန်ပြူတာ နည်းပညာတော်လှန်ရေး အကြောင်း ဆိုပါတော့ လို့စာအုပ်မှာ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ အတွေးအမြင်မှာ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာကစလို့ အဲသည်စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ခဲ့ရာမှာ ခေါင်းစဉ်များ ခွဲပီး အပိုင်း ၆ခု တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကွပြူတာနည်းပညာ တော်လှန်ရေးသိ့ ခြေလှမ်းများ ဆိုပီး ဆက်လက် ဘာသာပြန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ )
(မက်စက်ချူးဆက် အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မှာ သြဇာသက်ရောက်လှတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး Norbert Wiener ( နော်ဘတ် ဝီနာ ) က ကွန်ပြူတာခေတ်ကို သွားဖို့ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းခဲ့တဲ့အထဲမှာ သူချပြခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေထဲက နောက်ဆုံးတစ်ခု အကြောင်း အခုဆက်ပါ့မယ်။ ဘာသာပြန်သူရဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်တွေကိုတော့ အခုလို ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။)
လျှပ်စစ်နည်းပညာကို လုံးဝဥသုံ အသုံးပြုထားကြသော်လည်းပဲ ABC ကွန်ပြူတာများဟာ ဝီနာချပြခဲ့တဲ့ လူတွေကို သက်သာအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းနဲ့ တော်တော် ဝေးကွာနေပါသေးတယ်။ လူတွေက ကွန်ပြူတာစက်ကြီး အလုပ်လုပ်ပြနေတာကို ရပ်ကြည့်နေရသေးတယ်။ ခလုပ်တွေ နှိတ်နှိတ် နေရသေးတယ်။ မီတာတံလေး အလုပ်လုပ်နေတာကိုလည်း မျက်ခြေပြတ်လို့ မရသေးဘူး။ ပန့်ချ်ကဒ်ကလေးတွေကိုလည်း စက်ထဲ ပစ်ပစ်ထည့်ပေးနေရသေးတယ်။ ပြောရရင်တော့ ကွန်ပြူတာစက်ကြီးကနေ အဖြေထွက်လာတာကို ဘေးကနေ လူတွေလိုက်လုပ်ပေးနေရတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ လုပ်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ် ဆိုပါတော့။ ဘဲလပ်ဓာတ်ခွဲခန်းကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Complex Computer (ကွန်ပလက်စ် ကွန်ပြူတာ) တွေလည်းပဲ ထူးတော့မထူးပါဘူး။ သူတို့လည်း ပရိုဂရမ်တွေ မရှိသေးဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးဘူး။ မှတ်ညဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အားနည်းနေသေးတယ်။ ဂဏာန်းပေါင်းစက်ကလေး အလုပ်လုပ်သလောက်ပဲ ရသေးတယ်။ ဒစ်ဖရှင်ရှယ် အန်နာလိုက်ဇာ ဆိုတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ပြသနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားကြတိုင်း ဘီးလုံးတွေ၊ဂီယာတွေ၊ ဆွဲသီးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်နေကြရဆဲပါပဲလေ။
၀ီနာပြောပုံအရတော့ ကွန်ပြူတာတွေကို သီးသန့်အလုပ်လုပ်ပြခိုင်းဖို့ လိုတယ်တဲ့။ အဆင့်ဆင့်တွေကိုလည်း သူ့ဘာသာသူ သွားနေရမယ်တဲ့။ တချိူ့ပရိုဂရမ်တွေကိုလည်း သူ့ဘာသာသူ ထိန်းချူပ်နိုင်ရမယ်တဲ့။ အဲဒီအခြေအနေကို ရောက်ဖို့ကွန်ပြူတာအတွက် ပရိုဂရမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာသာစကားကို ချပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - ” အကယ်၍ X=0 ဖြစ်ရင် ၊ Y နဲ့ပတ်သက်တာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး Z နဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်“ ဆိုတာလိုပေါ့တဲ့။
ရှနွန် က သူ့စက်ကြီးကို အဲသည်သီအိုရီကို ထည့်သွင်း ခဲ့တယ်။ ဝီနာရဲ့ စာတမ်း ၁၉၄၀ ခုနှစ် အရ ပြောရရင် ကွန်ပြူတာဟာ ဟားဗက်တက္ကသိုလ် က အော်တိုမစ်တစ် ကယ်ကူလေတာ (ဂဏန်းတွက်စက်) လောက်တော့ အသုံးတည့်နေပီတဲံ။ သူ့ကို နောက်တော့ Mark I (မာ့ခ် ဝမ်း) လို့ခေါ်တယ်။ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အဆင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂဏာန်းတွက်စက်က ဟားဗက်တက္ကသိုလ်က အပလိုင်းသချာင်္ဘာသာရပ် ဆရာ Howard H. Aiken (ဟိုဝါ့ဒ် အိတ်ချ် အေကင်) ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူက ဘွတ်ချ် တို့၊ တခြားသော ကွန်ပြူတာ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတို့လိုပဲ ကိန်းဂဏန်းအတွက်အချက်တွေ၊ ကိုင်ရတွယ်ရတာတွေကို တော်တော် စိတ်ပျက်နေတဲ့သူ။ သချာင်္မှာ အဲသည်လို ကိန်းဂဏန်း အကြိးကြီးတွေ ပါနေတာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရပါ့မလဲဆိုပီး အော်တိုမစ်တစ် အတွက်အချက်ကို ရှာဖွေခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒါ့အပြင်သူက ၁၈၃၀ ခုနှစ်များဆီက အင်္ဂလိပ်လူမျိူးတီထွင်ပညာရှင် Charles Babbage (ချားစ် ဘက်ဘိတ်ချ်) ရဲ့ တီထွင်မူတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေကို လေ့လာလိုက်စားခဲ့ဖူးတယ်။ အဲသည်ပညာရှင်ရဲ့ လည်ပတ်သော အင်ဂျင် ဆိုတဲ့ နည်းပညာဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားတယ်တဲ့။ အဲဒါကို Analytical Engine လို့ခေါ်သတဲ့။ ကဗျာဆရာ Lord Byron (လော့ဘိုင်ရွန်) ရဲ့ သမီး Augusta Ada Byron (အော်ဂတ်စ်အာဒါ ဘိုင်ရွ) န်ကလည်း စက်ပစ္စည်း ပါဝါများဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်တွေ အများကြီး ရေးသားခဲ့သေးတယ်ဆိုပဲ။ ဘက်ဘိတ်ချ်က အဲသည်တုန်းက သည်လို အနာလစ်တစ်ကယ်အင်ဂျင်ဟာ နောင်တချိန်ကျ တကယ့်ကို လူ့အကျိူးပြုမယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သတဲ့။ သည်တော့ ပြောရရင်တော့ အာဒါဘိုင်ရွန် ကို ပထမဦးဆုံး ပရိုဂရမ်ရေးသူလို့ ခေါ်ရမယ်။ ချားစ် ဘက်ဘိတ်ချ်ကိုလည်း မော်ဒန်အတွက်အချက်ဆိုင်ရာ ဖခင်ကြီးလို့ခေါ်ရမယ်။ ဟောသည် ၂၀ရာစု ဟိုဝါ့ဒ် အိတ်ချ် အေကင် ဟာ မမျော်လင့်ပဲ ဘက်ဘိတ်ချ်ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို ၁၉၃၀ ပိုင်းလောက်မှာ ဖတ်မိသွားတယ်။ အမေရိကမှာတောင် ဘက်ဘိတ်ချ် ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိ နံမယ်တောင် မကြားဖူးကြပါဘူးတဲ့။
အေကင်က ၁၉၃၇ခုနှစ်မှာ Automatic Calculator အော်တိုမစ်တစ် ကယ်ကူလေတာ (ဂဏန်းတွက်စက်) ကို သေချာ ဒီဇိုင်းဆွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့အသက်က ၃၇နှစ်။ သူရုပဗေဒဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့တက်ဖို့ မစခင်မှာတင် သူဟာ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ်နဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်လောက် Westinghouse ဝက်စ်တင်ဟောက် မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူက အဲသည်လို ကာလတွေမှာဆိုရင် သူအခုလက်ရှိဒီဇိုင်းထဲမှာ ပြွန်ချောင်းတွေအသုံးပြုဖို့ မစဉ်းစားဖူးခဲ့ပါဘူး လို့ဆိုတယ်။ သူအသုံးပြုနေတာတွေက ဘိုင်နရီအတွက်အချက်တို့၊ ဒသမကိန်းများ အပေါင်းအနှတ်တို့နဲ့ပါတဲ့။ တကယ်တန်း လက်တွေ့ကျကျ လုပ်တောာ့ သူ့ဒီဇိုင်းဟာ ဘက်ဘိတ်ချ် ရဲ့ အင်ဂျင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သူဖန်တီးတဲ့ စက်အင်ဂျင်ဆိုတာက တကယ်တန်းတော့ ရှေးက ဘက်ဘိတ်ချ်နည်းပညာရယ်၊ ယခုလက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ ဂဏာန်းတွက်စက်ရယ် တွေကနေ တိုးမြင့်လာတာတွေပါပဲ။ သည်တော့ အေကင်ရဲ့စနစ်ထဲမှာ ဘက်ဘိတ်ချ်ရဲ့ ပရိုဂရန်တွေပါလာတယ်။ အပေါက်ကလေးတွေနဲ့ စာဖတ်ရတဲ့ ပန်ချ် ကဒ်တွေပါလာပါတယ်။
အေကင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းက စာရွက်ပေါ်မှာပါ။ သည်တော့ ဒါအလုံးအထည်ဖြစ်လာဖို့ နောက်ခံလိုပါတယ်။ သည်တော့ သူ့ဒီဇိုင်းကို အမြင်ကောင်းအောင် နံမယ်ရှိပီးသား ဂဏာန်းတွက်စက်တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ရုံးတွေ အလုပ်ရုံတွေကို ချည်းကပ်ရတယ်။ သူ့ဒီဇိုင်းက ၆ပေ၂လက်မ မြင့်တယ်။ လူ့တရပ်ကျော်ကျော်မို့ အမြင်အားဖြင့် တော်တော် မော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့။ သည်တော့ သူ့ကြိုးစားမူက IBM (အိုင်ဘီအမ်) ကုမဏီရဲ့မျက်စိကျမူကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်ကျမှပဲ ရလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲသည်က အထင်ကရပု၈္ဂိုလ်ကြီးက Thomas B. Watson (သော်မတစ် ဘီ ဝါ့ဆင်) ပါတဲ့။ IBM (အိုင်ဘီအမ်)ဆိုတဲ့အမည်က ကွန်ပြူတာဆိုတဲ့ အမည်တူဖြစ်လာပါတယ်။ IBM (အိုင်ဘီအမ်) ဆိုတဲ့ ပန့်ချ် ကဒ်တွေက တကယ့်ကို ခေတ်မှီတယ်၊ စျေးကြီးတယ်၊ အသုံးကျပါသတဲ့။ ဝါ့ဆင်က IBM (အိုင်ဘီအမ်)ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ အေကင်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမူကိုလည်း သဘောတူတယ်။ အေကင်တည်ဆောက်မယ့ ်စက်ကြီး ဂဏာန်းတွက်စက်ကြီးကို IBM (အိုင်ဘီအမ်) ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ တည်ဆောက်မယ်တဲ့။ အေကင်က စဉ်းစားတယ်၊ သူ သည်အလုပ်နဲ့တော့ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်။
အေကင်ရဲ့ စက်ကြီးကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ စဆောက်ပါတယ်။ နယူးယောက်က အင်ဒီကော့အရပ်မှာ ရှိတဲ့ အိုင်ဘီအမ်စက်ရုံမှာပါ။ ၄နှစ်ကြာတယ်။ အေကင်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်းတွေကို တကယ်ရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေ တော်တော်လေး ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်။ ၁၉၄၄ခုနှစ်တိုင်အောင် ဟားဗက်ကို တကယ်ပို့ဖို့တောင် စက်က မပြီးပါဘူး ။ Howard H. Aiken (ဟိုဝါ့ဒ် အိတ်ချ် အေကင်) ဟာ ပြောရရင်တော့ ရေတပ်က ပထမဦးဆုံး ကွန်ပြူတာသမိုင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သူလို့ ကင်ပွန်းတပ်ရမှာပါ သူက ၁၉၄၁ခုနှစ်မှာ ရေတပ်အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကိုး။ ရေတပ်မှာ တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ အတွက်အချက်တွေကို သူက တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့သူပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ ၁၉၄၄ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့သူ့စက်ကြီးကို ကြည့်ပီး သူတကယ်စိတ်လှူပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။
Thomas B. Watson (သော်မတစ် ဘီ ဝါ့ဆင်) သုံးခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို အေကင်က သိပ်အထင်မကြီးဘူးတဲ့။ ပီးတော့ အေကင်က အဲသည်အကောင်တွေကို ဘာမှ ထည့်သွင်း ပြောဆိုတာမျိူးမလုပ်တော့ ဝါ့ဆင်က တော်တော်စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ သူ့သားဖြစ်တဲ့ Thomas Watson. Jr (သော်မတ်စ် ဝါ့ဆင် ဂျူနီယာ) လည်းအဲဒါကို ဒေါသဖြစ်တယ်တဲ့။ သူက “အဖေနဲ့အေကင် တို့ ၂ယောက်လက်ထဲ သေနပ်တွေများရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပစ်တာနဲ့ ၂ယောက်လုံး သေပီ“ လို့တောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲပေါ့လေ သူ့စက်ကြီးက တော်တော် ကြီးကျယ်ခန်းနားပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေရှေ့မှာလည်း တော်တော် အထင်ကြီးခံရတယ်။ အရပ်၈(ရှစ်) ပေမြင့်ပီး ၅၁(ငါးဆယ့်တစ်) ပေရှည်ကာ ၂ပေ အထူ လောက်ကို ကြီးမားရုံတင်မကပဲ သိပ္ဗံပညာကမ္ဘာမှာ တော်တော်ကြီး သစ်လွင်တောက်ပ တဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတော့ ဝါ့ဆင်ရဲ့ရပ်တည်မူနဲ့တင် လူထုစိတ်ဝင်စားမူ ရတယ်။ စက်ကြီးရဲ့ကိုယ်ထည်ကလည်း သံချေးမတက်ရဲ့ စတီးနဲ့ဖန်သားနဲ့ဆိုပဲ။ သတင်းထောက်တွေက အဲဒါကို “လျှပ်စစ်ဦနှောက်” လို့ခေါ်တော့ အေကင်က တော်တော်စိတ်ဆိုးသတဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အမေရိကန်လူထုမှာ ကွန်ပြူတာစာမျက်နှာကို ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်လေသတည်း လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ (၄) Reviewed by MoeMaKa on 7:00 AM Rating: 5